Ciidamo ka tirsan NISA oo Muqdisho lagu dilay - Awdinle Online
Ciidamo ka tirsan NISA oo Muqdisho lagu dilay
Rag hubeysan ayaa Barqanimadii Maanta waxaa ay agagaarka Buundooyinka ee degmada Waaberi ee Gobolkan Banaadir ay ku dileen Saddex dhalinyaro ah oo la sheegay inay kamid ahaayeen Ciidamada Nabadsugida qeybta dharcadka ee loo yaqaano ilaalada Shacabka.
Rag dilka fuliyay oo ku hubeysnaa bustoolado ayaa goobjoogayaal waxaa ay sheegeen inay goobta ka baxsadeen, waxaana la sheegay in Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay halkaasi tageen, iyaga oo halkaasi ka qaaday meydadka raga la dilay.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya aya howlgallo ka sameeyay halka uu dilka ka dhacay, hayeeshee aan weli la sheegin dad ay u qabteen dilkaasi ka dhacay agagaarka Bundooyinka ee degmada waaberi.
Laamaha ammaanka Soomaaliya iyo Maamulka degmada Waaberi weli kama hadlin dilkaas, waxaana degmada Waaberi bilihii la soo dhaafay ay kamid aheyd meelaha ugu amniga wanaagsan Muqdisho, isla markaana ay ka yaraadeen dilalkii ka dhici jiray.
Previous articleJubbaland oo sheegay inay fashiliyeen qarax gaari lagu xiray
Next articleDhacdo Naxdin leh: Gabar kufsi iyo dil loogu geystay Gobolka Galgaduud